Monday May 18, 2020 - 15:25:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dadka cudurka Carona ugu dhimanaya dalka Mareykaka ayaa ku dhow boqol kun oo ruux xilli ay soo baxayaan digniino ku aaddan in cudurkan uu dad badan ku layn doono wadanka Mareykanka.
Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dadka Carona ugu dhintay dalka Mareykanka ay kor udhaafeen 89,000 oo qof American ah, magaalooyinka New York iyo washington ayaa ah meelaha ugu badan ee dadku ku dhammaanayaan.
shabakadda CNN ayaa sheegtay in khilaaf xooggan oo ku aaddan sida loo maaraynayo caabuqa Covid19 uu ka dhax qarxay Donald Trump iyo guddi caafimaad oo uu uxilsaaray in ay cudurkan xakameeyaan.
Trump ayaa amarka ku bixiyay in dib loo furo suuqayada iyo kaabayaasha dhaqaalaha wadanka iyadoo wax shuruud ah aysan jirin halka saraakiisha guddiga caafimaadka ay arrintaas ku tilmaameen qorshe faashil ah oo sare usii qaadi kara faafidda Carona Virus.
ilaha caafimaadka dalka Mareykanka waxay sheegayaan in cudurku uu si xowlli ah bulshada ugusii dhax faafayo tan iyo markii la go'aamiyay in dib loo furo gobollada qaar islamarkaana xaaladdii bandawga aheyd la khafiifiyay.
Brack Obama ayaa isbuucii lasoo dhaafay Trump ku eedeeyay in uu si xun u maamulayo qaabka loola tacaalayo caabuqa Covid19.